महिलाका स्तन किन बराबरका हुँदैनन् ? यी हुन् कारण > | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
महिलाका स्तन किन बराबरका हुँदैनन् ? यी हुन् कारण >
काठमान्डौ । स्त्रीको सबैभन्दा आर्कषक अंग हो स्तन । चाहे त्यो महिलाका लागी होस् वा पुरुषका लागी नै किन नहोस् । चाहे त्यो कुनै सौन्दर्य प्रतियोगीतामा होस् वा पौडी पोखरीमा वा अन्य समयमा युवतीको स्तन पहिलो हेराई नै रोजाई हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तर पनि हत्तपत्त यिनको आकार सुन्दरतामा मानिस हराउने हुनाले यसको साइज समान हुँदैन भन्ने धेरैलाई पत्तै हुँदैन । चिकित्सकका अनुसार पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिलाका दुइ स्तन मध्ये दुवै बराबर कसैको पनि हुँदैन । दुई स्तन मध्ये एउटा ठूलो र एउटा सानो हुन्छ । जुन आकार आकार प्राकृतिकरुपमा नै बढाउन सकिन्छ ।
यसका लागि कुनै कस्मेटिक सर्जरी गर्नु पर्ने वा अन्य मद्दत लिन जरुरी छैन । गर्भवती भएपछि स्तनको आकार आफै बढ्छ र केही खुल्ला पनि हुन्छन् । तर युवती अवस्थामा देखिने भिन्नता धेरैलाई पत्तै हुँदैन ।
महिलाका स्तनबारे रोचक कुरा यस्ता छन्
१. महिलाका दुइ स्तन मध्ये दुवै बराबर कसैको पनि हुँदैन । दुई स्तन मध्ये एउटा ठूलो र एउटा सानो हुन्छ ।
२. स्तनको आकार प्राकृतिकरुपमा नै बढाउन सकिन्छ । यसका लागि कुनै कस्मेटिक सर्जरी गर्नु पर्ने वा अन्य मद्दत लिन जरुरी छैन । गर्भवती भएपछि स्तनको आकार आफै बढ्छ र केही खुल्ला पनि हुन्छन् ।
३. तपाइँलाई अचम्म लाग्न सक्छ स्तनको आकार आफै ठूलो र सानो भैरहन्छ । खासमा शरीरमा हुने हर्मोनको परिवर्तनले यस्तो हुने गर्छ । महिनाबारी हुनु अघि महिलाको स्तनको आकार बढ्छ र केही दिनमा भने सामान्य आकारमै फर्किन्छ ।
४. एक अध्यनका अनुसार महिलालाई भेट्दा २० प्रतिशत पुरुषले मात्र अनुहार हेर्छन् बाँकी ८० प्रतिशतले स्तनमा आँखा पुर्‍याउँछन् । रमाइलो कुरा के छ भने कुनै पनि महिलाको स्तन १० मिनेट सम्म हेर्दा पुरुषको शरीरमा आधा घण्टा सम्म शारीरिक अभ्यास गरेको जति उर्जा पैदा हुन्छ ।
५ . यदि महिला घोप्टो परेस सुतेमा उनीहरुको स्तनको आकारमा प्रभाव पर्न सक्छ । महिलाहरुलाई सके सम्म घोप्टो परेर नसुत्न र सुत्नै परे स्तन भन्दा तल सिरानी राखेर सुत्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । सुत्ने समयमा ब्रा नलगाएको राम्रो हुन्छ । लगाउनै परे अलि खुकुलो ब्रा लगाउन चिकित्सकहरु सल्ला दिन्छन् ।
६.संसारमा सबैभन्दा ठूला स्तन अमेरिकाको टेक्ससमा बस्ने ३४ वर्षीया मोडल शेला हर्शलका छन् । उनले आफ्नो स्तनलाई ९ पटक सर्जरी गरेर घडप्प्प् बनाएकी छिन् ।
७ . प्राकृतिकरुपमा नै सबैभन्दा ठूला स्तन भएकी महिला भने एनी हकिङ्स टर्नर हुन् । उनको नाममा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड समेत बनेको छ ।
८ . कतिपय महिलालाई स्तनको टुप्पो अर्थात निप्पल चलाएकै भरमा यौनिक चरमोत्कर्षको अनुभव समेत हुन्छ ।
९ . बेलायतको लण्डनमा ३४ यस्ता रेष्टुरेन्ट छन् । जहाँ श्याम्पेनका गिला बक्षस्थलको आकारका छन । अझ अनौठो कुरा त यी गिलाशको आकार अभिनेत्री केट मसको स्तन जस्तो बनाइएको छ । यसमा केटको सिग्नेचर समेत छ ।
१०. कतिपय पुरुषका समेत स्तन र निप्पल प्रष्ट देखिन्छ । किन भने शुरुमा सबै भ्रुण शुरुमा केटी नै हुन्छन् । गर्भावस्थाको ६ हप्ता पछि मात्र टेस्टोस्टरनका कारण लिङ्ग छुट्टिन शुरु गर्छ ।